Miandry fa… Syriana mpifindramonina ao Libanona · Global Voices teny Malagasy
Miandry fa… Syriana mpifindramonina ao Libanona
Voadika ny 17 Septambra 2018 18:54 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, русский, Deutsch, Português, Italiano, English
Samir, avy any Syria, mipetraka ao amin'ny tranony ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana tsizarizary ao amin'ny lemak'i Bekaa ao Libanona. Saripikan'i Darrian Traynor. Nahazoana alalana.
“Efa mba tsaratsara kokoa noho ny teo aloha ny toby,” hoy i Abu Iday tamin'ny Global Voices. Amin'ny maha-lehibe tsy ofisialy an'ireo vondron'olona mpitsoa-ponenana Syriana vitsy ao amin'ny Foibem-Pialokalofana Al-Rihaniya ao Akkar ao avaratr'i Libanona azy, nilaza i Iday: “Na dia mbola tahaka ny fonja aza.”
Ny fonenana any an-toeran-kafa indray no fanantenana tokana hisian'ny fiainana tsaratsara kokoa ho an'ireo Syriana mpitsoa-ponenana manodidina ny iray tapitrisa ao Libanona, saingy matetika izany miteraka fiandrasana mahatrotraka tsy voavisavisa teo aloha.
Raha misy ihany ny herinjiro, tsy maintsy miampita arabe matsaka sy mampiasa ny trano fidiovan'ny kaominina ny mpialokaloka. Olona arivo eo ho eo no miaina ao anatin'ny tranolay natolotry ny Komisarià ambony misahana ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana (UNHCR), na dia efa tao amin'ny toerana nandritra ny taona maro aza izy ireo. Afa-mandao ny foibe ny mponina ao ara-teoria fa tsy maintsy mandalo toera-pisavana itandroana ny filaminana.
Nahatsiaro i Abu Iday:
One resident went out and got stopped at a checkpoint near Tripoli [Lebanon] and put in jail for three days because he didn’t have the proper ID. On his way home after his release, he got stopped at the same checkpoint in the other direction and spent another three days in jail.
Nisy mponina iray nivoaka dia voatazona teo amin'ny toeram-pisavana iray akaikin'i Tripoli [Libanona], ary nampidirina am-ponja satria tsy manana ny kara-panondro araka ny tokony ho izy. Rehefa niverina navotsotra avy any am-ponja indray izy voatazona teo amin'ilay toeram-pisavana teo ihany ary nigadra telo andro hafa indray.
Amin'ny ankapobeny ny Syriana mialokaloka ao Libanona no miaina ity karazana “Miandry an'i Godot” [Miandry an'i Paoly?] ity. Raha te-hiverina any Syria ny maro, be kosa no nitsoaka an-daharana nandositra ny fanompoana miaramila na efa nisy fifandirana tamin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, izay manasarotra ny mety ahafahana miverina — na dia efa mifarana aza ny ady.
Tsy manana kara-panondro fiarovana ny ankamaroan'ny Syriana mialokaloka any Libanona ka mametra ny fahafaha-mivezivezy na dia eo aza ny lazaina fa politika ofisialin'ny UNHCR amin'ny fanolorana tolotra hafa noho ny tobin'ny mpialokaloka. Ny marina, maro amin'ny mpialokaloka no tsy mahazo fanampiana raha vao tsy manana adiresy ofisialy ary tsy maintsy mandoa hofa mihoa-pampana hahazoana trano tsy manara-penitra na ampahatany hametrahana ny tranolainy. Fantatra fotsiny amin'ny hoe “toeram-pivoriana” ireo toerana misy ny fianakaviana mpitsoa-ponenana (na vitsy na an-jatony).
Taona vitsy lasa izay, mandray fanampiana manodidina ny 260.000 livra Libaney (tokotokony ho $175 amerikana-USD) isam-bolana avy amin'ny UNHCR ny isam-pianakaviana. Saingy nihena fatratra ny vatsin'ny INHCR ka tsy nandray vola intsony ny mpialokaloka, fonosan-tsakafo sisa no azo. Tsy maintsy miala vola am-paosy ry zareo amin'ny fitsaboana na lasantsy hanafanana ny ao an-trano (tsy maintsy ilaina rehefa ririnina).
Ankizy milalao eo amin'ny tobin'ny Syriana mpialokaloka ao amin'ny lemaka Bekaa ao Libanona. Saripika avy amin'i Darrian Traynor. Nahazoana alalana.
Fiandrasana famindram-ponenana, mihemotra hatrany hatrany
“Andehananay daholo izay azonay aleha,” hoy i Abu Adel, monina ao Al-Rihaniya. Nantsoin'ny UNHCR hanatrika antsafa famindra-ponenana izy sy ny fianakaviana 18 volana lasa izay.
Taorian'ny antsafa naharitra roa andro maninjitra tao amin'ny biraon'ny UNHCR tao Tripoli izay namoahana hatramin'ny antsipiriany ny fiainan-dry zareo tao Syria, nisento ny fianakaviana rehefa nahare fa nohamarinina ny tantaran-dry zareo ary mahafeno tanteraka ny fepetram-pamindram-ponenana any Frantsa.
Nitosatosaka ny fiarahabana avy amin'ny biraon'ny UNHCR rehefa niverina nankany al-Rihaniya ny fianakaviana ary mbola nahazo fiarahabana sy fifanaovam-beloma tamin'ireo mpifanolo-bodirindrina sy ny namana. Nandeha ny andro; nivadika ho herinandro; niofo ho volana, nefa tsy nandrenesana na inona na inona intsony amin'ny famindram-ponenan-dry zareo avy amin'ny UNHCR.
Dimy volana niandrasana, nahazo antso ihany i Abu Adel: “Miala tsiny amin'ny fahatarana, fa tsy nanaiky ny dosienao i Frantsa.” Efa ho herintaona aty aoriana, mbola eo am-piheverana izay famindra-ponenana azy any amin'ny firenen-kafa ny fianakaviana.
Abu Adel sy i Umu Adel vadiny mipetraka ao amin'ny tranolay vonjimaika ao amin'ny tobin'ny syriana mialokaloka ao avaratr'i Lebanona. Saripikan'i Darrian Traynor. Nahazoana alalana.
Matetika no tratran'izao karazana kinanga izao ny fombafombam-pamindra-ponenana.
Monina ao amin'ny toeram-pivoriana iray tsy ofisialy ao amin'ny lemak'i Bekaa i Samir, avy ao Hama, Syria amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alin'ny mariaziny tamin'ny taona 2012, tonga hisambotra azy noho ny fiahiahiana fa mandray anjara amin'ny fiokoana ny herim-piarovana avy amin'ny governemantan'i Bashar al-Assad.
Nalahelo an'i Samir ny miaramila ny alin'ny mariaziny saingy nampitandrina fa hiverina ry zareo ny ampitso. Rehefa vita ny fifamofoana dia nandositra nankany Libanona i Samir sy i Hiba vadiny. Efa ho dimy taona taty aoriana, tamin'ny marsa 2017, nandray anjara tamin'ny andian'antsafa nifanaovana tamin'ny UNHCR izy mivady ary nahazo fankatoavana famindra-ponenana.
Na izany aza dia manan-janakalahy 17 taona avy amin'ny fanambadiany teo aloha ary miara-monina amin'i Samir sy i Hiba i Samir. Amin'ny maha-mbola tsy ampy taona azy dia mbola tsy maintsy mahazo fankatoavana avy amin'ny renin'ny zazalahy, izay mitsoa-ponenana ao amin'ny toby Zaatari ao avaratr'i Jordania, koa aloha voalohany indrindra i Samir. Hita ho sarotra loatra ny famenoana ny antonta-taratasy.
Herinandro vitsivitsy izay, feno 18 taona ny zanak'i Samir ka tsy mila alalana avy amin'ny reniny intsony mba handehanana lavitra. Feno fanantenana i Samir sy ny fianakaviany fa mbola tsy foana ny famindram-ponenan'ny UNHCR.
Monina ao Libanona ihany koa amin'izao fotoana izao i Sara, Irakiana mpitsoa-ponenana avy any Mosul, milaza ny tantaran'ny anadahiny Ahmed izay efa nafindra monina any Aostralia tokony ho 18 volana lasa izay. Hatramin'izay fotoana izay izy no miandry ao Libanona handre ny momba ny fangatahan'ny fianakaviany amin'ny famindra-ponenana azy araka ny politikan'ny fampivondronana ny fianakaviana.
“Efa maro ny olona voafindra fonenana,” hoy izy “Nangataka ho any Aostralia ihany koa izahay fa mbola miandry izahay 18 volana mihoatra aty aoriana.”
Herinandro izay, nahare i Sara fa efa naharay taratasy fitsipahana ny fangatahan'ny fianakaviany ny anadahiny fa noho ny tsy fahaizany loatra ny teny anglisy, dia tsy azony tsara ny hafatra.
Diso fanantenana sy kivy i Sara fa mbola miandry ny hanandrana indray amin'ny alalan'ny fantsona famindra-ponenana mpialokaloka avy amin'ny governemanta Aostraliana iray hafa – ny Programam-Panohanan'ny Vondrom-Piarahamonina (CSP) nahitsy. Programa izay mampandoa vola ireo mpialokaloka hatrany amin'ny $50,000 dolara Aostraliana ($36,500 USD) isan'olona rehefa manao fangatahana.
“Tokony vita tamin'ny jolay 2017 ny antsipirian'ny CSP nahitsy,” hoy ny mpikambana iray ao amin'ny ekipan'ny Firahalahian'i Saint Laurence (fikambanana aostraliana nankatoavina hanaiky mpifindramonina), “fa tsy mbola nahare izay antsipiriany momba ny programa izahay hatramin'ny marsa 2018.”
Io fahatarana io no mahatonga ny mpifindramonina maro any Libanona mihitsoka amin'ny fangatahana ho any amin'ny firenena hafa.
Mbola “maika hiandry” hatrany ny mpitsoa-ponenana toa an'i Sara, Samir, Abu Adel ary ireo an'arivony hafa any Libanona tratran'ny fanemorana sy ny fampanantenana poakaty.
Tamin'ny fahatongavany tao Libanona ny mpifindramonina mahatsapa voatery hisoratra anarana amin'ny sata misy an-dry zareo ho fanombohana ny fombafombam-pifindra-ponenana saingy miandry fotoana tsy manam-pahataperana manaraka ny fandehan'ny fombafomban'ny fanjakam-birao.
Mandritra izany fotoana izany ny mpitsoa-ponenana maro miaina ny halalina mahasorenan'ny fahabangana eo am-piandrasana izay tahaka ny fepetra maizin'ny fombafombam-pamindra-monina tenany.
7 ora izayArabia Saodita